Nairobi: QM oo Ka hadashey Maamul u sameynta Gobalada Dalka – idalenews.com
Dowlada Soomaaliya oo gacan buuxda ka heleysa ciidamada AMISOM waxay ku guuleysatay in deegaano badan ay ka saarto Al-shabaab,laakiin wali waxay caqabad ka taagan tahay Maamul u sameynta goboladaasi oo wali Muran kooda taagan yahay.
Madaxa arimaha siyaasada Qaramada Midoobay ayaa shalay u sheegay Golaha amaanka in Soomaaliya laga gaaray hormar la arki karo lana taaban karo,balse wuxuu carabka ku dhiftay in wali dul duleelo ay jiraan,kuwaasi oo loo baahan in Beesha caalamka ay buuxiso.
Jeffrey Feltman,oo ah Madaxa siyaasada Qaramada Midoobay ayaa 15-ka xubnood ka hor tilmaamay in howlgalka AMISOM ee Qaramada Midoobay ay taagereyso uu galay waji cusub oo ah in gobolada ay isku baahiyaan ciidamada,islamarkaana Al-shabaab ay la dagaalaam iyagoo deegaano horay shabaab gacanta ugu jiray ay qabsadaan.
Wuxuu sheegay in dowlada Federaalka uu Madaxda ka yahaya Xasan Sheekh Maxamuud ay dooneyso inay higiliso Lixda tiir ee dowlada ay ku dhisan tahay.
Jeffrey Feltman,oo hadalkiisa dhinac badan taabanayay ayaa soo hadal qaaday in dowlada ay ku mashquulsan tahay sameynta maamulka hoostaga dowlada oo loo sameynayo gobolada dalka Soomaaliya,isagoona si gaar ah farta ugu fiiqay Maamulka Jubaland oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay in Maamulo kale deegaanada kale loo sameeyo.
Inkastoo ay socdaan hididiilada lagu doonayo in Maamul goboleedyo loogu sameeyo gobolada dalka Soomaaliya,hadana wuxuu shaaca ka qaaday inay jiraan caqabado ka imaanaya Ururka Al-shabaab oo dalka ka dagaalama,kuwaasi oo wali ku sugan deegaano ka tirsan Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaasi raaciyay in Al-shabaab ay sameynayaan dadaal waliba ay kaga hortagayaan sidii ay ku hakin lahaayeen dadaalada Nabadeed ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya.
Ugu danbeyntii Qaramada Midoobay ayaa balan qaaday inay sii laba jibaari doonaan caawinaada ay ku taageerayaan dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed.
Muuqaalkii ugu danbeeyay ee Muqdisho (DAAWO Muqaalkan)